Ucothoze phezu kwamaqanda uMngqithi egigiyela ukugxeka abagadli beSundowns abagejayo - Impempe
Ucothoze phezu kwamaqanda uMngqithi egigiyela ukugxeka abagadli beSundowns abagejayo
February 14, 2021 February 15, 2021 Impempe.com
Abadlali beMamelodi Sundowns, oThapelo Morena noPeter Shalulile bebungaza uzakwabo uKermit Erasmus oshaye igoli
Uma ubala amathuba akhandwa yiMamelodi Sundowns emdlalweni ngamunye ungabamba ongezansi umangazwe wukuthi kungani pho umgadli ngamunye engaphumi okungenani namagoli amathathu.
Ukushweba amathuba alula yisona sifo abaqeqeshi beMamelodi Sundowns, oManqoba Mngqithi, Rulani Mokwena noSteve Komphela – ababizwa ngoMishack, Shadrack no-Abednigo bodumo lomilo eBhayibhelini – okumele baselaphe manje.
Uma bengalapha sona, cishe ambalwa amaqembu angeke azithole engasazazi noma agibele isitemela esingafanele noma asesesteshini yini eseshaywe ngembudlu yamagoli.
Lesi sifo siphinde saziveza kuhle kotwayi ngesikhathi iSundowns ihlulwa yinqwaba yamathuba yaze yagcina iwine ngo 2-0 kwi-Al Hilal emdlalweni weCAF Champions League ngoMgqibelo.
AMasandawana bekumele alithele ngehlazo leli qembu laseSudan lize lifike liqambe amanga ngakubo lithi ligingqeliwe yingakho libuya nenguzunga yeqanda nje.
Amagoli ewine ngawo iSundowns ashaywe nguMosa Lebusa oyisitobha noKermit Erasmus. ULebusa usheshe walishaya igoli kwangathi maningi alandelayo kodwa dololo.
“Singakhala ngabadlali sithi abawenzi kahle umsebenzi wabo njengoba bekumele bashaye amagoli bangakwenza lokho. Uma sibheka nasemdlalweni esawudlale neChippa United, sashaya amabili kodwa sasingashaya noma ayisishiyagalombili kuya eshumini.
“Nomdlalo ebesibhekene kuwo neStellenbosch uphele sekuminciwe kodwa sasingawashaya kalula nje amagoli amane kuwo, kodwa sasingebukhali phambili,” kusho uMngqithi ngemuva komdlalo wangoMgqibelo.
“Ababaningi abantu abahlonipha i-Al Hilal kodwa yithi esiseqoqweni elilodwa nayo futhi siyabazi ubungozi bayo, bangakuthela induku noma nini kungabi ndaba zalutho,” kuqhuba uMngqithi.
Ubuye abaxolele nokho abagadli bakhe ngokuthi banerekbodi elingelibi kakhulu kwiDStv Premiership njengoba beyiqembu lesithathu kwahamba phambili ngamagoli.
“Izibalo zethu zamagoli azizimbi kakhulu kodwa uma ubheka amathuba abengaba amagoli, uyabona ukuthi singakwazi ukushaya amaningi kunalokhu.
“Kodwa ngebhadi asiwasebenzisi amathuba ngendlela okumele ngabe senza ngayo. Asifuni nokho ukufakela abadlali ingcindezi ngoba uma usubaxina kakhulu bavele bahluleke kakhulu ukukwenzela lokhu okufunayo kubo,” kucacisa uMngqithi.
Previous Previous post: Useshiye phansi eKapa waqoma KwaZulu uKolisi
Next Next post: Ibukise ngeJwaneng iPirates iyibhaxabulela ekhaya koweCAF Confederation Cup